कतारको एक सफल व्यवसायिक जोडीको कारोबार अबौंमा, नेपालमा तारे होटलमा लगानी गर्दै::kamananews
कतारमा व्यवसायिक सफलता पाउने थुप्रै नेपालीमध्ये विकास प्रसाईं र अनु भट्टराईको जोडी पनि एक हो । कतारमा निर्माणदेखि रेष्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका विकास र अनुले भैरहवामा तीन तारे होटल निर्माणको तयारी गरेको छ ।
नेपाली कामदारहरुलाई लक्षित गर्दै कतारदेखि अन्य खाडी मुलुकहरुमा पोलिक्लिनिक खोल्ने तयारीमा जुटेको यो जोडी कतारमा खासै चर्चामा नआइकननै बार्षिक अबौं रुपियाँको कारोबार गर्न सफलता हासिल गरेको छ । कर्पोरेट नेपालका प्रतिनिधि सीताराम विलासीको कतार भ्रमणका क्रममा विकास र अनुसँग गरिएको कुराकानीको केही अंशः
कतार आएर कसरी व्यवसाय सुरु गर्नुभयो ?
विकासः कतार आएको ११ बर्ष भयो । सुरुमा एउटा कार कम्पनीको व्यवस्थापक भएर यहाँ आएको हो । आएको डेढ बर्षपछि व्यवसाय गर्ने इच्छा जाग्यो । यहाँ कुनै पनि व्यवसाय गर्न पनि एक खालको सहज बाताबरण लाग्यो । सोही क्रममा केही समय नेपाल गएँ । छ महिनापछि पुनः कतार आएर मैले कम्पनी स्थापना गरेको हो ।
श्रीमानको सफलताको श्रीमतीको महत्वपूर्ण हात हुन्छ । तपाईंले कुन कुन काममा उहाँ (श्रीमान)लाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ ?
अनुः मैले कन्ष्ट्रक्शनदेखि अन्य सबै व्यवसायमा काम गर्छु । ब्यूटीपार्लर मैले नै हेर्छु । हरेक काममा व्याक सर्पोट मेरो छ । पहिला मैले काम पनि कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीमै गर्थें ।
उहाँ एकाउन्टेन्टको रुपमा काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यही बेलामा हामीले पनि आफै केही काम गर्न सक्छौं भन्ने लाग्यो । उहाँ एकाउन्टेन्ट काम गरे पनि पेश इन्जिनियर थियो ।
नेपालमा काम नपाइने, पाए पनि भने जस्तो नपाइने स्थितिले उहाँ यहाँ आएर काम गर्नुभएको हो । सोही क्रममा म पनि आएँ र कामको अनुभव भएपछि केही गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो । सानै स्केलबाट काम गर्दागर्दै अहिले सफलता मिल्यो ।
तपाईंहरुको यति धेरै व्यवसाय छ । दुई जनाले कसरी सबैतिर हेर्नुहुन्छ ?
अनुः हाम्रो काम भनेको सुपरभिजन हो । हामी समन्वय गरेर जाने हेर्ने गछौं । काम गर्नेहरुले एउटा सिस्टममा काम गरिरहेको हुन्छ । सबै ठाउँमा हामी गएर बसिरहन संभव नै हुँदैन ।
पाईं इन्जिनियर मान्छे । के नेपालमा काम गर्ने अवसर थिएन र यहाँ आउनुभयो ?
विकासः हामी सन् २००६ तिर कतार आएको हो । त्यति बेला नेपालको अवस्था त्यति राम्रो थिइन । अस्थिरता थियो । काम पाउने काम गर्ने बाताबरण बनिसकेको थिएन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पनि बन्द हडताल, राजनीतिक अनिश्चितता जस्तो । हामी मध्यस्तरीय मान्छे ।
कतारमा आएर कम्पनी चलाउने, व्यवसाय गर्ने भन्ने सोचेको पनि होइन । आएर काम गर्न थालेपछि त्यो खालको सोच बन्यो । काम गर्दै जाँदा यहाँको नियम कानुन बुझिसकेपछि केही पुँजी नेपालबाटै ल्याएर कम्पनी सुरु गरेको हो ।
काम गर्दै जाँदा राम्रै भयो । यहाँ काम गर्न सहज छ । नेपालमा भए धेरै खालको चुनौति र जोखिम झेल्नुपर्छ व्यवसाय गर्दा । यहाँ त्यो खालको परिस्थिति निकै कम छ ।
भनेपछि यहाँको कानुन, यहाँको प्रशासन काम गर्नलाई बाधा छैन ?
विकासः काम गर्दा सानो तिनो अफ्ट्याकल (बाधा) त आइहाल्छ । त्यसलाई ट्रयाकल (सामना) गर्दै अघि बढनुपर्छ । गरिरहेका छौं । तर जुन खालको नेपालमा झमेला हुन्छ । दुःख दिइन्छ । त्यो यहाँ छैन । यहाँको नियम कानुनमा त्यस्तो विभेद छैन ।
तपाईं एउटा महिलालाई खाडी मुलुकमा व्यवसाय गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ श्र यहाँको कानुन फरक छ । बाताबरण फरक छ । संस्कार फरक छ ?
अनुः मलाई पनि सुरुमा त्यस्तै लाग्थ्यो । तर जुन खालको हामीले साच्ने गर्छौं, त्यस्तो छैन यहाँ । एयरपार्टबाट आउने क्रममा कतार जाने भन्दैमा हामीलाई अप्ठ्यारो महशुस हुन्छ ।
म यहाँ आएर काम गर्दा एकदमै स्वतन्त्र छ । महिला भएकैले असुरक्षित महशुस गर्नुपर्ने वा विभेद हुने भन्ने छैन । म आफ्नै मुलुक नेपाल जाँदा बरु त्यति स्वतन्त्र महशुस हुन्न । तर यहाँ त्यस्तो छैन । महिलालाई बरु यहाँ सम्मान छ । कुनै पनि काम गर्दा कन्फिडेन्स (विश्वस्त) भएर काम गर्न सक्छौं ।
कतारमा तपाईंहरुले कमाएर अनुभव र पुँजीलाई नेपालमा लगानी गर्ने के सोचाई बनाउनु भएको छ ?
अनुः यहाँ सधै बस्ने भन्ने हुँदैन । हामीले यहाँ जति कमाउने नेपालकै लागि हो । नेपालमै लगानी गर्ने हो । नेपालमा अलिकति स्थिति सुधार होस भन्ने प्रतिक्षामा हो ।
पालमा निर्माण कार्यले गति पनि लिन लागेको छ । सँगसँगै निर्माणको गुणस्तरमा पनि प्रश्नहरु उठने गर्छ । तपाईंले यहाँ निर्माण क्षेत्रमा जुन खालको अनुभव बटुल्नुभएको छ, यसलाई कसरी स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ ?
विकासः नेपालमा समस्या भनेको निर्माणको काम गर्ने कुरामा फाइदालाई मात्रै हेर्ने । सस्तोलाई मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति छ । कुनै पनि घर वा भवन बनाउने भन्ने कुरा लामो समयको लागि हो । निर्माणको जिम्मा लिनेबाट मापदण्डअनुसारको निर्माण सामग्री प्रयोग नगर्ने । समयमा पनि काम नगर्ने ।
त्यसको प्रभावकारी अनुगमन सरकारी निकायबाट पनि नहुने अवस्था छ । घर बनाउनेको पनि त्यति ध्यान पुगेको हुँदैन । अनुभव नभए वा आर्थिक कारणले पनि हुनसक्छ । कतिपयमा यत्तिको भए चलिहाल्छ नि भन्ने सोच हुन्छ । यहाँ हेर्नुहुन्छ भने इन्जिनियरको नियमित सुपरभिजनमा काम भइरहेको हुन्छ ।
सुरुदेखि नै कुनै पनि कुरामा कन्जुस्याईं हुन्न । एक नम्बरका निर्माण सामग्रीको प्रयोग हुन्छ । सरकारकै मानिसहरु पनि आएर त्यसको अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । यसरी गर्ने हो भने नेपालमा पनि नराम्रो निर्माण हुँदैन । मैले पनि भोलि नेपालमै गएर काम गर्ने हो । त्यही सिलसिलामा रियल स्टेट (घरजग्गा)मा पनि लगानी गरेको छु ।
भोलि मैले काम गर्दा जुन मैले सिकेको छु । जानुको छु । जुन उत्तम प्रवृधि हो । त्यही अपनाउने हो । त्यही अनुभवका आधारमा मैले काठमाडौंमा समेत घरहरु बनाएको छु । ती घरमा त्यत्रो भूकम्प जाँदा कतै पनि स्क्र्याच (चर्केको) छैन । भूकम्प जाँदा म काठमाडौंमै थिएँ । स्क्र्याच नभएका घर पाउन मुस्किल थियो ।
तपाईंले यसअघि मेडिकल सेन्टर स्थापना गर्न लागेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो । कति लगानीका खोल्दै हुनुहुन्छ ?
विकासः हामीले गरेको अध्ययनअनुसार त्यही १.५ मिलियन कतारी रियल (चार करोड २७ लाख रुपियाँ) लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो भनेको सुरुवाती लगानी हो । यो पोलिक्लिनिक हो । अहिले यसका लागि तीन किसिमका डाक्टरहरु आउँदैछन् । एउटा स्किन (छाला), जनरल फिजिसियन र अर्को डेन्टल (दाँतसम्वन्धी) ।
तपाईंले कतारमा आएर ब्यूटीपार्लरहरु चलाउनुभएको छ । यो खालको ब्यूटीपार्लर सञ्चाललन गर्ने तालिम नेपालका बेरोजगार महिलाहरुलाई दिने कुनै योजना छ ?
अनुः योजना छ । तयारी पनि गरिरहेको छु । मैले यहाँ सुरु गरेको करिव एक बर्ष मात्रै भएकाले कसरी यसलाई नेपालमा विस्तार गर्ने भन्ने सोचमा छु ।
तपाईंको अबको योजना के छ भनिदिनु न । कसरी अगाडि बढने ? नेपालमा कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्ने सोचाई छ ?
विकासः भविश्यमै पनि म यही गति, यही उत्साहले काम गर्ने हो । कुनै पनि काममा लगनशील भएर काम गरेपछि सफलता प्रायः हुन्छ । मैले सुरु गर्न लागेको पोलिक्लिनिक पनि कतारसहित अन्य गल्फ (खाडी) कन्ट्रीमा विस्तार गर्ने सोचाई छ ।
नेपालमा अहिले रियलस्टेटमा लगानी छँदैछ । यसलाई विस्तार गर्ने र अर्को भनेको होटलमा लगानी गर्ने योजना छ । भैरहवा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ ।
त्यहाँ तीन तारे स्ट्ण्डर्ड (मापदण्ड)को होटल बनाउने तयारी गरेको छु । लगानी कति हुन्छ, त्यसको डिजाइन तयार भएपछि थाहा होला । तर यो हाम्रो एकल लगानीमा हुन्छ ।
जस्तो लगानी गर्ने कुरामा बाहिर बसेका नेपालीहरुबाट नेपालमा लगानीको बाताबरण नै भएन भन्ने गुनासो धेरै आउँछ । तपाईंहरुले अहिलेको स्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
विकासः हिजो हामी कतार आउँदाको स्थिति त अहिले छैन । धेरै कुरामा सुधार हुँदै गएको छ । संविधान पनि बन्यो । नियम कानुन र सोचाईमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ । स्थानीय चुनाव पनि भएपछि आर्थिक विकासले पनि गति लेला । लगानी गर्ने कुरामा जस्ले पनि सहज बाताबरण खोज्छ ।
हामीले आफ्नो मुलुकमा लगानी नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । क्रमसः बढाउँदै जाने हो । किनभने हाम्रो जग भनेको कतार हो । यहाँ सफल भएर, यहाँ कमाएर नेपालमा लगानी गर्ने हो ।
यहाँ दुःख गरेर कमाएको पुँजीलाई नेपालमा सही ठाउँमा लगानी गरौं । त्यसले सही प्रतिफल दियोस् । रोजगारी पनि सिर्जना होस । मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि योगदान पुगोस भन्ने हो ।
अन्तिममा, जुन ढंगले लाखौं नेपाली युवाहरु मुलुक छोडेर खाडीमा आएर दुःख गरिरहेका छन् । के यो सही हो ? होइन भने कस्को कमजोरी हो ?
विकासः यो बाध्यता हो । यसमा चाहना कमैको मात्र हो । अधिकांशको बाध्यता हो । हुन त नेपालमै बसेर काम गर्दा पनि बिहान बेलुका खान त कसैलाई पनि समस्या नहोला ।
तर जिबिकोपार्जनका लागि, सहज जीवन यापनका लागि कतारको ५२ डिग्रीको गर्मीमा आएर काम गर्नुपर्ने धेरैलाई बाध्यता बनेको हो । यसमा दोष म कुनै राजनीतिक दललाई दिन्न ।
यो हाम्रो जुन खालको सामाजिक व्यवस्था छ । राजनीतिक स्थिति । आर्थिक प्रणाली छ । त्यसले सिर्जना गरेको समस्या हो । जबसम्म मुलुकमा पद्दतीको विकास हुन्न ।
आर्थिक विकासको दीर्घकालिन सोच, त्यसमा सबैको इमान्दारिता र प्रतिवद्धता हुँदैन, तवसम्म नेपाली दाजुभाई कतार धाउनु बाध्यता हुन्छ । कर्परेट नेपाल बाट
बलात्कारपछि जन्मिएको नवजात शिशुको हत्या अभियोगमा जेल सजाय सुनाइएकी गुरुङले चिठीपत्रमा भएको हेलचेक्राइँ र ढिलाइका कारण तोकिएभन्दा दोब्बर समय जेलमा बिताउनुपरेको हो।
पीडितले क्षतिपूर्ति रकमका लागि दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले आइतबार गुरुङलाई बढी जेल समयको क्षतिपूर्ति भराउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
गुरुङलाई अदालती फैसलाभन्दा ५ वर्ष ६ महिना १० दिन बढी समय जेलमा राखिएको थियो। थुनावापतको क्षतिपूर्ति भराएर मौलिक हक र मानवअधिकार कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेकी हुन्।
गुरुङले गरिब र निरक्षर रहेका कारण माइतीमै बसेर ज्याला मजदुरी गर्नेक्रममा बलात्कृत भएर गर्भाधान गरेको र त्यसबाट जन्मेको नवजात शिशुलाई लोकलाज र गरिबीका कारण हत्या गर्न विवश भएको याचना सर्वोच्चसँग गरेकी थिइन्।
माइतीमै बारीमा काम गरी घर फर्किंदा बाटोको जंगलमा आफूमाथि जबर्जस्तीकरणी (बलात्कार) भएको र त्यही कारण गर्भवती भई जन्मेकी छोरीको हत्या गरेको स्वीकारोक्ति उनको थियो।
पालनपोषणको समस्या र लोकलाजका कारण २०४८ साल मंसिर २४ गते शिशुको हत्या गरेको भनाइ उनको छ।आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
क्षणिक आवेगका कारण ४२ महिनामा २,१६४ को हत्या
काठमाडाैं । १. प्युठान नगरपालिका–१ खैराकोटका २७ वर्षीय गिरबहादुर विकले २३ वर्षकी श्रीमती बागेश्वरीलाई कोदालाको पाताले टाउकोमा हाने । भुइँमा ढलेकी बागेश्वरी छटपटाउँदा पनि गिरबहादुरको रिस थामिएन, दोस्रो प्रहार गरे । घरायसी विवादमा श्रीमान्को रिसले बागेश्वरीको ठाउँको ठाउँ मृत्यु भयो ।
२. कन्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–४ का ४२ वर्षीय बिरु डगौरा र उनकी पत्नी ४० वर्षीया लाहुबीचको विवाद कुटपिटमा बदलियो । बिरुले पत्नीको टाउको समातेर घरको भित्तामा बजारे । टाउकाबाट रगत बग्दासमेत बिरुको रिस थामिएन । उनले लछार्दै फेरि भित्तामा ठोके । लाहुको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।
३. सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–५ फोक्लिङ टापुका ५४ वर्षीय कुमार राई मानसिक रोगी थिए । उनले बाटामा हिँड्दै गरेकी ३६ वर्षीया मीरा विकलाई ढुंगाले हाने । घटना नियालिरहेका मीराका श्रीमान शंकर विक आवेगमा आए ।
उनले कुमारलाई समातेर कुटपिट गरे । उनीसँगै थिए २२ वर्षीय शम्भु भुजेल । कुटपिटमा भुजेल पनि मिसिए । दुई भाइको कुटाइले अचेत बनेका राईलाई उपचारका लागि धरानस्थित घोपा अस्पताल लगियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो ।
यी प्रतिनिधि घटना क्षणिक आवेग नियन्त्रण गर्न नसक्दा भएका हुन् । देशमा साँढे तीन वर्षमा दुई हजार १६४ ले यस्तै आवेगका कारण अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको यस तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा प्रत्येक दिन दुईजनाको ज्यान यसैगरी जाने गरेको देखिन्छ । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी मनोज नेउपानेले क्षणिक आवेग नियन्त्रण नहुँदा हुने हत्या तुलनात्मक रूपमा बढेको बताए । उनले भने, ‘गत तीन वर्षमा दुई हजारभन्दा धेरैको हत्या भएको छ । यी घटना अधिकांश क्षणिक आवेगकै कारण भएका देखिन्छन् ।’
यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै हत्या आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा देशभर ६ सय २७ को हत्या भएको थियो । त्यसपछि ०७३/७४ मा धेरै ६ सय १६ को हत्या भयो ।
आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा भने ६ सय आठजनाको हत्या भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा तीन सय १३ जनाको हत्या भएको छ ।
‘संख्या हेर्दा हत्या धेरै नै भएको देखिन्छ । तर, तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा यी घटना सामान्य हुन् ।’ नेउपानेले भने, ‘यी घटनामा कमजोर सुरक्षाका कारण नभई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकजस्ता कारण छन् ।’
कहिले कति हत्या ?
०७१/७२ : ६०८
०७२/७३ : ६२७
०७३/७४ : ६१६
पछिल्लो ६ महिना : ३१३
जम्मा हत्या २,१६४
कहाँ कति हत्या ?
सबैभन्दा धेरै हत्या तत्कालीन मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सात सय ८८ जनाको भएको छ । तीन सय १५ हत्या काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै भएका छन् । पश्चिमाञ्चलमा तीन सय आठ, मध्यपश्चिमाञ्चलमा दुई सय ८१, पूर्वाञ्चलमा दुई सय ५२ र सुदूर पश्चिमाञ्चलमा एक सय ९१ जनाको हत्या भएको छ ।
२९५ बालबालिकाको हत्या
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार हत्या हुनेमा पुरुषको संख्या धेरै छ । ४२ महिनामा एक हजार एक सय १९ पुरुषको हत्या भएको छ । यो कुल हत्याको ५१ प्रतिशत हो । यही अवधिमा सात सय ५० महिलाको हत्या भएको छ ।
यो संख्या ३४ प्रतिशत हो । बाँकी १५ प्रतिशत भने बालबालिका रहेका छन् । यस अवधिमा एक सय ५२ बालकको र एक सय ४३ बालिकाको हत्या भएको छ ।
किन हुन्छन् हत्या ?
डा. टीकाराम गौतम, समाजशास्त्री
सोम, फाल्गुन १४, २०७४ मा प्रकाशित
अर्थ/व्यापार बाट अन्य
अर्बौंको घाटा बेहोरिरहेको फेसबुकको वास्तविक ‘अपराध’ के हो ?
एजेन्सी । फेसबुकमार्फत प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी चोरिएको खबर बाहिर आएपछि फेसबुक कम्पनीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आक्रामक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । फेसबुकसँगै अर्को सूचना विश्लेषक कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिका पनि यस कार्यमा संलग्न भएको आरोप छ...
डलरको भाउ बढ्यो , साउदी, कतार दुबई , मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ उकालो लाग्यो .. हेर्नुहोस आजको बिदेसी मुद्राको विनिमय दर
डलरको भाउ बढ्यो , साउदी, कतार दुबई , मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ उकालो लाग्यो .. हेर्नुहोस आजको बिदेसी मुद्राको विनिमय दर… नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ...
आज दोहोरो अंकले घट्यो सेयर बजार
काठमाडौं, रासस । सेयर बजार आज दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । नेप्से दोहोरो अंकले घटेर एक हजार २८४ दशमलव ९ बिन्दुमा पुगेको हो । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार नेप्से आज ३१ दशमलव ४ बिन्दुले...
२७ बैंकले रोके एनआईसी एसियासँगको कारोबार
२५ फागुन, काठमाडौं । २७ वटा बाणिज्य बैंकले एनआईसी एसिया बैंकसँगको अन्तर बैंक कारोबार बन्द गरेका छन् । बचत र मुद्धति निक्षेपमा ग्राहकलाई दिइने ब्याजदरमा सीमा नाघेको भन्दै बैंकर्स संघमा आवद्ध बैंकहरुले अन्तर बैंक...
यी हुन् ससारक सबैभन्दा धनि ट्रम्प खस्किए, गेट्सलाई उछिन्दै शीर्ष स्थानमा बेजोस
काठमाडौँ ।फोर्ब्स पत्रिकाले वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने संसारका धानीहरुको सूचीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प २२२ स्थान तल खस्किएका छन् । उनको कूल सम्पत्ति ३.५ अर्ब डलरबाट ३.१ अर्ब डलरमा झरेपछि उनी धनीहरुको सूचीमा पछि परेका...
देउवाले रित्याएको ढुकुटी भर्दै अर्थमन्त्री खतिवडा, एउटै निर्णयले १ अर्व २२ करोड रुपैया राजस्व संकलन
काठमाडौं, १८ फागुन/ सोमबार मात्रै अर्थमन्त्रीको रुपमा काम थालेका डा. युवराज खतिवडाको एउटै निर्देशनले एकै दिनमा भन्सार बिन्दुबाट १ अर्व २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती कामचलाउ सरकारले रित्याएको...
१३५८ मा नेप्से परिसूचक, बजार घट्दा सेयर किन्ने बढे
१४ फागुन, काठमाडौं । नेप्से परिसूचक एकै दिन १५ अंकले घटेर १३ सय ५८ बिन्दुमा आइपुगेको छ । लगातार घटेको बजार १४ सय विन्दुको टेवा परिक्षणमा देखिदै आएको भएपनि सफल नभएपछि लगानीकर्ताहरु अत्तालिएका छन्...
कतारमा ५ वर्षमा नकमाएका विरेन्द्रको कमाइ नेपालमै महिनाको लाखौ कमाइ हेर्नुहोस
जुनादेवी खत्री/कास्की । फागुन २ – कास्कीका विरेन्द्र भण्डारी भाँडोमा दूध बोकेर घरघरमा पुगेको देख्दा छिमेकीहरु मास्टरले दूध बेच्न थाले छ भन्दै कानेखुसी गर्थे । विरेन्द्र चिने जानेकालाई दूध किन्न अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो । तर धेरैले पढाउन...
कालीमाटीका तरकारी व्यवसायीलाई यस्तो छ चेतावनी
काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले नियमसम्मत ढंगले कारोवार नगर्ने व्यवसायीलाई कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले नियमसम्मत ढंगले कारोबार नगर्ने व्यवसायीलाई कडा कार्वाही गर्न बाध्य...
आगामी फागुन २५ गते नेपाल बैंकले एफपिओ प्रस्तावसहित डाक्यो साधारण सभा
काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्व ६२ प्रतिशत रहको नेपाल बैंकले प्रिमियम मूल्यमा थप नयाँ साधारण शेयर (एफपिओ) निष्कासन गर्ने प्रस्तावसहित आगामी फागुन २५ गते ५८ औं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ । बैंक संचालक समितिले हाल...